Cabdiraxmaan Cirro: “Dadku waxa ay ka dibadbaxayaan Maciishadda qaali garowday & Doorashada”. | dayniiile.com
Home WARKII Cabdiraxmaan Cirro: “Dadku waxa ay ka dibadbaxayaan Maciishadda qaali garowday & Doorashada”.
Cabdiraxmaan Cirro: “Dadku waxa ay ka dibadbaxayaan Maciishadda qaali garowday & Doorashada”.
Musharraxa Madaxweynaha Xisbiga Mucaaradka Waddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa Xukuumadda Muuse Biixi Cabdi ku dhaliilay in ay awood u adeegsaneyso Dadka muujinaya dareenkooda la xiriira in la qabto Doorashada.
Cabdiraxmaan Cirro waxa uu sheegay in aanay marnaba la caburin Karin Shacabka Muujinaya dareenkooda balse Xukuumadda looga baahan yahay in awoodda ay gelineyso in ay is hor istaagto ay isugu geyso qabashada Doorashada 13ka November 2022.
Cirro waxa uu sharci darro ku tilmaamay xubnaha Mucaaradka ee u xiran Ciidamada ammaanka Somaliland si ay u joojiyaan dibadbaxa uu wado Xisbiga Mucaaradka Waddani ee ka dhanka ah Xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
“Doorasho ayaa rabnaa, qabtana waan leenahay, waa nasiib darro in la caburiyo oo awood loo adeegsado Dad Shacab ah iyo Xildhibaanno Xasaanad leh rasaas lagu furo, la dhaawaco oo xitaa qaarkood la xidho, 5 bil iyo dheeraad ayaa hadhay oo lagu qaban karo Doorashada balse waxa Xukuumaddu waddo waa raadinta dib u dhigista Doorashada si ay usii joogto” ayuu yiri Cabdiraxmaan Cirro.
Musharraxa Madaxweyne ee Xisbiga Mucaaradka Waddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa sheegay in Sabtida oo ah 11ka June 2022 ka go’an tahay in uu qabsoomo mudaharaadka mucaaradka.
Sababta xoojineysa dibadbaxa ayuu ku sheegay in isbaddel weyn uu ku yimid maciishadda, korontada halka Xukuumaddii mas’uulka ka ahayd wax ka qabashada dhibaatooyinaas ay ka mashquushay, dibadbaxa Doorashadana uu hoos galayo arrimahaas.
“Sarkaal baa la dilay, mid baa dhaawacmay iyo sarkaal baa la xidhay mana cabsi gelineyso intaas maalin weliba ayay dunida ka dhacaan balse hadafka loo socda ayaa ka weyn, dareenka dadka soo baxayay waxa ay muujinayeen dareenka nolosha qaali garoobay, Doorashadu waxa ay u tahay qorshaha labaad, waxa aynu qarka u saaranahay in aan leydhka iska deyno oo aan feynuus ku laabano” Sidaasi waxaa yiri Cabdiraxmaan Cirro.
Ciidamada ammaanka Somaliland ayuu ugu baaqay in ay joojiyaan Fulinta awaamiirta khaldan ee ka dhanka ah Dadka dareenkooda muujinaya, maadaama uu Dastuurka uu u fasaxay, keliya waxa laga doonayay ay tahay in ay wargelin sameeyaan taasina gudbiyeen.
Previous articleMadaxweyne Xasan Sheekh Iyo Uhuru Kenyatta Oo Is-Afgarad Hordhac Ah Ku Gaaray Muqdisho
Next articleKulamo xal raadin ah oo ka socda degaan ka tirsan Gobolka Galgaduud
Ciidamada dowladda & kuwa ATMIS oo howlgal qorsheysan ka fuliyay Shabeellaha...
Maamulka Gobolka Mudug oo warar ka soo saaray weerarkii Caawa lagu...
RW Rooble Oo Ka Hadlay Guusha Guddoomiyaha Cusub Ee Golaha Shacabka